v Iri mmiri na-ere | Rayson
v Iri mmiri na-ere
Rayson ejirila ebumnuche nke ịbụ ọkachamara na nke ọma. Anyị nwere ndị otu R & D siri ike nke na-akwado mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ, dị ka nke na-ere ugbo ala. Anyị na-anụ ezigbo nlebara anya na ọrụ ndị ahịa ya, anyị ewepụtala ụlọ ọrụ. Ndị ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ n'etiti na-anabata arịrịọ ndị ahịa na-anabata arịrịọ ndị ahịa ma nwee ike soro ọnọdụ ịtụ ya n'oge ọ bụla. Ebighị eto na-ebi ndụ anyị bụ inye ndị ahịa nwere ngwaahịa dị oke ọnụ na ngwaahịa dị elu, na iji mepụta ụkpụrụ maka ndị ahịa. Ọ ga-amasị anyị iso ndị ahịa na ụwa niile na-arụkọ ọrụ niile. Kpọtụrụ anyị ka anyị nweta nkọwa ndị ọzọ.
Na zuru oke v ihe opupu ihe ubi na-ere ahịa na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị na-emepụta ihe nkiri, na-etolite, na-emepụta ihe niile dị arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere Vlay matarasị, kpọọ anyị ozugbo.
Dị ka ụlọ ọrụ a na-achụ, Rayson amalitela ngwaahịa na nke anyị kwa oge, otu n'ime ha na-ere ite mmiri. Ọ bụ ngwaahịa kachasị ọhụrụ ma ga-eweta abamuru ndị ahịa.
Ọnụahịa dị mma maka Top 10 Hot Sale Spring Bed Mattress + Best Price Top 10 Hot Sale Spring Bed Mattress, Ihe ọhụrụ na ire ọkụ ebe ọ bụ na 2018.Both compressing and packing packaging are available.Pocket spring.Best price, https: //www.raysonglobal .com.cn
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Ọkachamara Alibaba Hot Products Banye Sale polyester Na Ohiri Isi emepụta Ogo Rayson na-ekwe nkwa. Usoro imepụta ya na-elekwasị anya na nchekwa ndị na-azụ ahịa site na ịhụ na ị na-agbaso ụkpụrụ nchekwa n'oge nhazi.
Rayson na mpaghara Rayson Industrial, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Isi ihe eji eme ya High bu ihe eji egwurugwu olulu mmiri spring 佛山 佛山 瑞 信 无纺布 有限公司. Matraasi nke oge opupu ihe ubi Amatala ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe na ọrụ n'okpuru ọrụ Rayson. Ngwaahịa a na-enye arụmọrụ na-agbanwe agbanwe nke ndị ahịa nwere ike ịtụkwasị obi. otu matraasi mmiri Ngwaahịa ahụ bụ ọgwụ nje. A na - emeso ya site na ihe ndị na - egbochi nje ihe na - emebi ihe owuwu ma mebie mkpụrụ ndụ nke nje.